Madaxwaynaha Maraykanka ayaa Booqasho hawleed ku yimid Ethiopia. - Cakaara News
Madaxwaynaha Maraykanka ayaa Booqasho hawleed ku yimid Ethiopia.
AA(CN) Axad-July-26-2015 waa booqashadii ugu horaysay ee madaxwayne maraykan ah ku yimaado ethiopia oo xidhiidh qotodheer ka dhaxeeyay labada dal in ka badan 100 sano. Brack obama ayaa ay si diiran ugu soo dhaweeyeen gagida diyaaradaha ee Bole international airport Madaxwaynaha DFI,Raysal-wasaaraha,Wasiiro iyo diblomaasiin.
safiirka itoobiya u jooga USA ayaa sheegtay in dalka itoobiya dhaqaalihiisu si xawli ah ku socdo islamarkaana ah dal ay ka jirto nabadgalyo taam ah. madaxwayne Obama ayaa joogi doona itoobiya mudo labo cisho ah isagoona kulamo la qaadan doona madaxwaynaha DFI Mr Mulatu Tashome iyo raysal-wasaaraha DFI Mudane Hailemariam Desalegn.
Mudada uu Brack obama joogo addisababa ayaa la filayaa in uu ka qaybgali doona shirka urur-goboleedka Afrika ee ka dhici doona xarunta midawga afrika ku leedahay addisababa kana hadli doono xalinta khilaafaadka Koonfurta suudaan,dhaqaalaha,xidhiidhka iyo ladagaalanka argagaxisada.